IApartment yaseBianca Loft-iApartments zeGadi zikaBianca - I-Airbnb
IApartment yaseBianca Loft-iApartments zeGadi zikaBianca
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguTina
Ivunywe liSebe lezoKhenketho #00165
Amafulethi amahle aBanzi kwindawo yabucala ebekwe kwicala elizolileyo le-Boracay, kude nesihlwele esixakekileyo kunye nendawo yepati yaseWhite Beach. Ibekwe phezu kwenduli enembonakalo entle yegadi yethu kunye neBolabog Beach.
I-Bianca's Garden Apartments inamagumbi ama-6 amahle abanzi anefenitshala ngokupheleleyo kwindawo ezolileyo, enoxolo encotsheni yenduli yaseBoracay, kude nesiphithiphithi seendawo zoKhenketho zaseBoracay. Nangona kude necala elixakekileyo lesiqithi kuthatha nje imizuzu embalwa ukuya embindini. Ifumaneka kwisitishi sesi-3.
4.77 · Izimvo eziyi-90
- ibekwe phezu kwenduli kwisikhululo sesi-3 ngasemva kwe-king fisher road.
- Icala elizolileyo laseBoracay.
-Indlela yabucala ekhokelela kumagumbi egadi yaseBianca. (isiqingatha esingagangathwanga, siGanga ngesiqingatha sesiqingatha samanzi)
-Ipropati yaBucala kunye noMlindi ngasesangweni.
- UFikelelo olulula kwizithuthi zikawonke-wonke kunye nokufikelela ngokulula kwiindawo ezinomtsalane zaseBoracay.
Abasebenzi bogcino lwezindlu baya kukwazi ukukunceda kwaye bakuncede uzinze. Ndiya kuba khona kwaye ndifumaneke ukuba kuyimfuneko. Uya kuba nakho ukuqhagamshelana nam nge-airbnb okanye ngefowuni, ndingakunika iingcebiso zezona ndawo zibalaseleyo kwisiqithi sokuthenga, imivalo, iindawo zokutyela, imidlalo yamanzi, imisebenzi njl.
Abasebenzi bogcino lwezindlu baya kukwazi ukukunceda kwaye bakuncede uzinze. Ndiya kuba khona kwaye ndifumaneke ukuba kuyimfuneko. Uya kuba nakho ukuqhagamshelana nam nge-airbnb ok…